तपाईँ रङहरू, ग्रेडियन्स, वा ह्याचिङ बान्कीहरू स्थापना गर्न तपाईँ सूचीहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. LibreOffice ले बिभिन्न सूचीहरू प्रदान गर्दछ जुन तपाईँ तपाईँको कागजातमा लोड र प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने, तपाईँ सूचीबाट तत्वहरू थप वा मेटाउन सक्नुहुन्छ, वा अनुकूल सूचीहरू निर्माण गर्नुहोस् ।
रङ सूची लोड गर्न:
रोज्नुहोस् ढाँचा - क्षेत्र, र क्लिक गर्नुहोस् रङहरू ट्याब
क्लिक गर्नुहोस् रङ सूची बटन लोड गर्नुहोस् ।
रङ सूची अवस्थित गर्नुहोस् जुन तपाईँ लोड गर्न चाहनुहुन्छ, र क्लिक गर्नुहोस् खोल्नुहोस् रङ सूची फाइल सँग ढाँचा [filename].soc छ ।
रङ सूची बचत गर्नका लागि, रङ सूची बचत गर्नुहोस् बटन क्लिक गर्नुहोस्, फाइलनाम प्रविष्ट गर्नुहोस् बचत क्लिक गर्नुहोस्.
CMYK सूची मुद्रण रङहरूका लागि अप्टिमाइज हुन्छ, जहाँ रङहरू वेबमा र HTML सूचीहरूमा २५६ रङहरूको रिजोल्युसन प्रयोग गरि अप्टिमाइज गरिन्छ ।
ग्रेडियन्ट सूची लोड गर्नका लागि:
छनौट गर्नुहोस् ढाँचा - क्षेत्र, र क्लिक गर्नुहोस् ग्रेडियन्ट ट्याब.
क्लिक गर्नुहोस् ग्रेडियन्ट सूची बटन लोड गर्नुहोस् ।
ग्रेडियन्ट सूची अवस्थित गर्नुहोस् जुन तपाईँ लोड गर्न चाहनुहुन्छ, र क्लिक गर्नुहोस् खोल्नुहोस्. ग्रेडियन्ट सूची फाइल सँग ढाँचा [filename].sog छ ।
ग्रेडियन्ट सूची बचत गर्नका लागि, क्लिक गर्नुहोस् ग्रेडियन्ट सूची बचत गर्नुहोस् बटन, फाइलनाम प्रविष्ट गर्नुहोस्, र क्लिक गर्नुहोस् बचत.
ह्याचिङ सूची लोड गर्नका लागि:
रोज्नुहोस् ढाँचा - क्षेत्र, र क्लिक गर्नुहोस् ह्याचिङ ट्याब
क्लिक गर्नुहोस् ह्याचेस सूची बटन लोड गर्नुहोस् ।
तपाईँले लोड गर्न चाहनुभएको ह्याचेस सूची अवस्थित गर्नुहोस्, र क्लिक गर्नुहोस् खोल्नुहोस्. ह्याचेस सूची फाइल सँग ढाँचा [filename].soh छ ।
ह्याचेस सूची बचत गर्नका लागि, क्लिक गर्नुहोस् ह्याचेस सूची बटन बचत गर्नुहोस्, फाइलनाम प्रविष्ट गर्नुहोस्, र क्लिक गर्नुहोस् बचत ।
ढाँचा - क्षेत्र
Title is: रङ, ग्रेडियन्ट, र ह्याचिङ सूचीहरू लोड गर्दा